ईखवर २७ बैशाख २०७८ सोमबार / नेपालमा गएकाे २४ घण्टामा नाै हजार दुई सय ७१ जनामा काेराेना भाइरसकाे सङ्क्रमण पुष्टि भएकाे छ । १७ हजार ६ सय २३ जनाको पीसीआर र सात सय ८८ जनाको एन्टिजेन विधिमार्फत परीक्षण गर्दा नाै हजार दुई सय ७१ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
याेसँगै नेपालमा अहिलेसम्म चार लाख तीन हजार सात सय ९४ जनालाई कोरोना सङ्क्रमण पुष�
ईखबर २१ बैशाख २०७८ मंगलबार / उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा हाल ७ जना कोरोनाका सकृय संक्रमित रहेका छन् । कटारी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शुरेस दाहालका अनुसार यस अघि पुष्टि भएका कटारी ५ का ३ जना र पछिल्लो पटक पुष्टि भएका ४ जना गरी ७ जना सकृय संक्रमित रहेका छन् ।
पछिल्लो पटक कटारी वडा नम्बर ३ का २ जना र वडा नम्बर २ का २ जना संक्रमित
ईखबर २० बैशाख २०७८ सोमबार / उदयपुरमा थप एक जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । विराटनगरस्थित नोवेल अस्पतालमा उपचारत चौदण्डिगढी नगरपालिका ५ का ५५ बर्षिय पुरुषको सोमबार कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भएको हो ।
बैशाख १८ गते रुघाखोकी लगायत अन्य समस्या देखिएपछि विराटनगरस्थित नोवेल अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका उनलाई उपचार गर्नुअघि कोरो
ईखबर १७ बैशाख २०७८ शुक्रबार / नेपालमा कोरोना भाइरसकाे सङ्क्रमणबाट थप ६१ जनाको ज्यान गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २८ जनासहित थप ३३ जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या तीन हजार दुई सय ७९ पुगेको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा पाँच हजार सात सय २७ जन
ईखबर १२ बैशाख २०७८ आइतबार / स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अहिलेकै दरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएमा केही दिनभित्रै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँसमेत नहुने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सङ्क्रमणको चक्र रोक्न नसकिएमा केही दिनभित्रै अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ नहुने चेतावनी दिएको हो । क�
चैत २६,२०७७ ईखबर / वायु प्रदूषणका कारण तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई खालका स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ।
यसैगरी दीर्घकालीन रुपमा मुटुको सम�
कटारी नगरपालिका वडा नंं. ४ घर भएका १४ वर्षिय बुद्ध तामाङ्गको उपचारको क्रममा नोबेल अस्पतालका डाक्टरको लापार्वाहिका कारण एउटा आन्द्रा अर्कै आन्द्राको ठाउँमा गलत जोडिदिएपछी गम्भिर विरामी भएको थियो । गम्भिर विरामी भएका तामाङ्गलाई उपचार गर्नको लागि आर्थिक समस्या भएको कुरा सामा�
२६ गते, सोमवार
उदयपुर–कटारीमा डेंगुको संक्रमण फेला परेको छ । २ जनामा डेंगु संक्रमण भेटिएको कटारी अस्पतालका डा. पवन शाहले बताए । यो भन्दा अगाडी कटारीमा डेंगु संक्रमण भेटिएको थिएन ।
एक हप्ता अगाडी ज्वरो आएर कटारी अस्पताल भर्ना भएकी कटारी ३ का निलम खड्का र चित्र बहादुर दाहाल लाई रगत परीक्षण पश
काठमाडौं । स्वस्थ रहन चाहिने पोषकतत्व खाँदा समयलाई ध्यान दिएर खाएन भने यसले शरीरमा फाइदाको सट्टामा हानी पुर्याउने खतरा बढी हुन्छ।
बिहान उठेपछि खाली पेटमा एसिडको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा बढी एसिडिटीयुक्त खानेकुरा खाँदा शरीरको पाचनशक्तिमा गढबढ आउँनसक्छ।
थाहापाउनुस् विहान खाली पेटमा खान नहुने यी चीज :